Magaalo ay gawaarideeda kala hagaan boombaleyaal dalka Hindiya | YoobsanNews.com
Mid ka mid ah magaalooyinka dalka Hindiya ee ay ka jirto saxmadda ugu badan ee dhinaca gawaarida ayaa la timid qorshe aan horay loo arag oo xal loogu raadinayo darawaliinta sharciga ka tallaabsada.
Boombaleyaal loo ekeysiiyay bani’aadan, oo loo maleynayo askarta ilaalada sharciyada waddooyinka ayaa la istaajiyay waddooyinka magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee Bangalore.
Iyagoo loogu labisay dharka ciidamada taraafikada ee isugu jira shaatiga cad iyo surwaalka bunniga ah, islamarkaana loo xiray okiyaaleyaal madow, ayey ka howlgalayaan isgowsyada ku yaalla waddooyinka waaweyn ee magaalada.
Waxaa rajo laga qabaa in darawaliintu ay ku khaldi doonaan ciidamada booliska ee saxda ah, sidaas awgeedna aysan ku dagdagi doonin inay sharciga waddada ka tallaabsadaan.
Magaalada Bangalore, oo hoy u ah cilmiga tiknoolojiyadda ee dalka Hindiya, ayaa waxaa ka diiwaangashan 8 milyan oo gaari, kuwaasoo si joogto ah u isticmaala waddooyinkeeda.
Tiradan ayaa la filayaa in sanadka 2022-ka ay sii gaarto in kabadan 10 milyan oo gaari.
Xawaaraha baabuurta magaaladan ayaan inta badan dhaafin 18.7 km/h (11.61 mph), waana magaalada labaad ee ugu saxmadda badan dhinaca gawaarida, guud ahaan dalka Hindiya, marka laga soo tago magaalada Mumbai.
Xogtan waxaa lagu sheegay daraasad uu soo saaray xafiiska socdaalka ee lagu magacaabo MovinSync Technology Solutions.
Kaamirooyinka ku xiran meelaha isgoysyada ah ayaa maalin walba duuba in ka badan 20,000 oo ah khaladaadka lagu sameeyo sharciga waddooyinka.
Haseyeeshee, dadka gaadiidleyda ah ayaa ra’yi kala duwan ka qaba in boombaleyaashan ay soo kordhinayaan xal loo helo dhibaatada jirta.
Qaar baa aaminsan inay wax soo kordhinayaan.
“Si fiican ayey u muuqdaan. Marka aad si dhow u eegto unbaad fahmi kartaa in aysan ahayn askar sax ah. Marka waxay sabab u noqonayaan in dadka gawaarida wata ay si wanaagsan u ilaaliyaan shuruucda, kuwa mootooyinka saaranna ay u hoggaansamayaan wax walba oo sharciga uu dhigayo”, sidaas waxaa yiri Gautam T, oo ah arday jaamacadeed.
Gautam iyo saaxiibkiis Talah Fazal had, oo ay isla dhigtaan jaamacadda waxay sawir la galeen mid ka mid ah boombaleyaasha waddooyinka la istaajiyay.
Sidaasoo kale, Saravana – oo magaciisa sidaas kusoo gaabiyay – ahna darawal kaxeeya mooto saddex-lugoodley ah, wuxuu mootadiisa dhigtay meel u dhow calaamad muujineysa inaan wax gaadiid ah la dhigi karin meeshaas, kuna xigta meesha uu taagan yahay mid ka mid ah boombaleyaasha. Laakiin wuxuu yiri: “Boombalahan wuxuu kugu khasbayaa inaadan ka tallaabsanin sharciga waddada”.
Dhinaca Twitter-ka, arrintan waxay ka noqotay mid aad loogu maadeysto, dad badan ayaana hadal haya.
Saleela Kappan, oo ah khabiir ku xeeldheer dhinaca xiriirka bulshada, ayaa sheegtay in barnaamijkan ay u aragto “wax lagu qoslo”.
“Boombaleyaashan aad bay ugu egyihiin ciidankeenna booliska saxda ah ee waddooyinka ku sugan. Laakiin aniga uma maleynayo inay wax soo kordhin karaan, sababtoo ah dadku waxay sharciga jabiyaan xitaa iyagoo ay boolisku isgoysyadan ku sugan yihiin”, ayey tiri.
BR Ravikante Gowda, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dhowrista shuruucda waddooyina ee magaalada Bangalore, ayaa sharraxaya ujeeddada ka dambeysa tallaabadan ay qaadeen: “Fikradda ku saabsan in boombaleyaashan la istaajiyo waddooyinka, oo maalin walbana la dhigo meelo kala duwan, sababteeda waa dadka oo anshaxooda ilaaliya marka ay ujeedaan inuu askari taagan yahay goobta. Laakiin marka aysan askari u jeedin, wax sharci ah ma dhowraan”.
Askari kale oo ka gaabsaday inuu magaciisa xuso, ayaa sheegay in boolisku ay sidoo kale darawaliinta ku jahwareeriyaan barnaamijkan, iyagoo mararka qaar askari sax ah istaajiyo goobtii lagu ogaa askariga boombalaha ah.
“Dhowr isbuuc ayaa kasoo wareegtay markii aan waddooyinka soo dhignay. Dadku way ka labalabeeyaan inay sharciga jabiyaan. Way jahwareereen maadaama aan boombaleyaasha maalin kasta ku baddalno askar run ah”, ayuu yiri.
Previous: Xaafado ka tirsan degmada afgooye oo uu ku fatahay wabiga Shabeelle
Next: Maxaa loo jecelyahay cunista basbaaska aadka u kulul?